गूगल मिट, माइक्रोसफ्ट टिम्स, वेबएक्सले ग्राहकहरुको आवश्यक भन्दा धेरै डाटा संकलन गर्दै - Technology Khabar
» गूगल मिट, माइक्रोसफ्ट टिम्स, वेबएक्सले ग्राहकहरुको आवश्यक भन्दा धेरै डाटा संकलन गर्दै
Technology Khabar २२ बैशाख २०७७, सोमबार
पछिल्लो दिनमा भिडियो कन्फेरेन्सिङ्ग टूल्सको प्रयोग बढेसँगै त्यसको बारेमा चासो र सरोकार बढिरहेको छ।
हालै आएको एक रिपोर्टअनुसार भिडियो कन्फेरेन्सिङ्ग प्लेटफर्महरुले प्रयोगकर्ताहरुको डाटा अनावश्यकरुपमा लगिरहेको देखिएको छ।
कन्जुमर रिपोर्टसले हालै गूगल मिट, माइक्रोसफ्ट टिम्स, वेबएक्सको गोपनियताको नीतिको बरोमा विश्लेषण गरेको छ र ती एप्सहरुले आवश्यकता भन्दा बढि डाट संकलन गरिरहेको भेटेको छ ।
कन्जुमर रिपोर्टसले ती एप्सहरु प्रयोगकर्ताहरुको लागि असुरक्षित भएको भनेर भनेको छैन् ।
तर ती सर्भिसहरुको प्राइभेसी पोलिसीहरुसँग सहमत भएको खण्डमा गूगल माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरुले कयौं व्यक्तिगत डाटाहरु लग्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टकाअनुसार यी तीनवटै कम्पनीहरुले तपाईँको कलहरुबाट सूचनाहरु संकलन गर्ने अधिकार राख्दछन, जसमा तपाईँले कति समयसम्म अन्तिम कल गर्नुभयो, कलमा को सहभागी थियो र हरेक सहभागीको आईपी एड्रेस संकलन गर्ने गरेको छ।
भिडियो कन्फेरेन्सिङ्ग टूल्समा विश्व निर्भर हुन थालेसँगै मानिसहरु ती सर्भिसहरुको सेक्यूरिटी मापदण्ड र प्राइभेसी पोलिसीको बारेमा जाँच गर्न थालेका छन् । यसको सबैभन्दा पहिलो उदाहरण हो जूममा भएको कमजोरी, जसलाई जूमबम्बिङ्ग समेत भनिएको थियो । र यो अझै महत्वपूर्ण छ जबकी माइक्रोसफ्ट, गूगल र सिस्कोले संकलन गर्नसक्ने डाटाहरुको बारेमा सचेत बनाउनेछ।
यी मध्ये कुनैपनि कम्पनीहरुले कुन प्रकारको डाटा साँच्चिकै संकलन गरिरहेका छन र कति समयसम्म त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ भन्ने जानकारी दिएका छैनन्।
सबै कम्पनीहरुले कन्जुमर रिपोर्टसलाई बताएअनुसार उनीहरुले केबल भिडियो रेकर्डिङ्ग वा मात्र सिर्जना गर्ने गरेको र जतिबेला सहभागीहरुले मिटिङ्ग रेकर्डिंगको अनुमति दिन्छन त्यसबेला ट्रान्सक्रिप्ट गर्ने गरेको बताएका छन र ती रेकर्डिङ्ग सिधै विज्ञापनको लागि प्रयोग नगरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
रिपोर्टअनुसार सिस्कोबाट वेबेक्स, माईक्रोसफ्टबाट स्काईप र टिम्स तथा मिट, डूओ र ह्यांगआउटस् गूगलबाट रहेका छन् । गूगलको एउटै प्राइभेसी पोलिसीले तीनवटै भिडियो कन्फेरेन्सिङ्ग सर्भिसहरुलाई समेटेको छ भने माइक्रोसफ्टले टिम्स र स्काईपको लागि एउटै माइक्रोसफ्टले पनि एउटै प्राइभेसी पोलिसी राखेको छ । एजेन्सी
के हो इन्कग्निटो मोड? के का लागि प्रयोग गर्ने?
सामसङको सस्तो ५जी फोन ग्यालेक्सी ए५२ ५जी आउँदै, यस्तो हुनेछ विशेषताहरु